Fiidiyowyo lagu barto Manifold iyo ArcGIS - Geofumadas
Fiidiyeyaasha si ay u bartaan Manifold iyo ArcGIS
Oktoobar, 2008 ArcGIS-ESRI, GIS kala cayncayn ah
ScanControl waa degel leh waxyaabo badan oo la soo bandhigi karo, laakiin midka sida aadka ah indhahayga u soo jiitay ayaa ah inay markii ugu horreysay soo bandhigtay muuqaallo taxane ah oo muuqaal ah oo ArcGIS ah, taas oo aan layaab ahayn maxaa yeelay waa aalad aad loo jecel yahay; laakiin waxa xiisaha leh ayaa ah inay sidoo kale soo bandhigeyso taxane ah fiidiyowyo Manifold GIS ah, aalad sii kordheysa laakiin nuxurka yar ee qaabka fiidiyowyada laga arkay codsigan.
Dhammaan fiidiyowyada lagu muujiyay ScanControl waxaa lagu dhisay Adobe Captivate, sidaa darteed waxay leeyihiin kontaroolo horumarineed iyo aalado muuqaal ah oo socda. Sidoo kale waa la soo dejisan karaa si loogu daawado iyaga oo ku jira flash player xal fiican.
Tani waa liiska fiidiyeyaasha ArcGIS
Qeybta 1: Abuuritaanka GeoDatabase ee ArcCatalog
Qeybta 2: Iskuxirka Miisaska Dibadda ee GeoDatabase
Qaybta 3: Qaabaynta Mawduuca Mawduucyada ee Natiijooyinka Su'aalaha Xogta
Tani waa liiska fiidiyowyada Manifold GIS
Qeybta 1: Soo dejinta joomatari iyo ku xirnaanta xogta
Qeybta 2: Adeegsiga Su'aalaha sifeynta Macluumaadka iyo Abuurista Khariidadaha Mawduucyada Soo-baxa
Qeybta 3: Ku xirnaanta Sawirada Satelite-ka Google
Qeybta 4: Ku darista Qodobbada
Qeybta 5: Muuqaalka sawirada dhijitaalka ah
Qeybta 6: Abuuritaanka faylasha kml ee loogu talagalay Google Earth
Qeybta 7: Ganacsiga GIS (Ganacsiga)
Iyadoo la adeegsanayo GIS awood-siinta (Ganacsi)
Qeybta 8: Sawirada Goynta iyo Xogta
Waxaa intaa dheer waxaa jira fiidiyo kale oo ku jira Lataliyaha GIS oo ku saabsan Manifold GIS, iyo inkasta oo ay bixiyaan waa wax fiican.
Post Previous" Hore View Street waa mid halis ah Yurub
Post Next Bentley inay bixiso Microstation Athens V8iNext »
Hal Jawaab "Fiidiyowyo lagu barto Manifold iyo ArcGIS"
Ricardo Alamilla isagu wuxuu leeyahay:
Sida muuqaalada fiidiyooga loo soo dejiyey